Kulanka Marwada Madaxweynaha Puntland Iyo Maamulka Jaamacadda Bariga Afrika – East Africa University
Proff Hodan Siciid Ciise – Marwada madaxweynaha Puntland ayaa booqasho ay ku timid jaamacadda bariga afrika xarunteeda wayn ee Bosaso, kula kulantay maamulka jaamacadda, hormuudyada kulliyadaha iyo qaar ka mid ah macallimiinta.
Kulanka ugu horreyn waxaa furay Mr. Maxamed Maxamuud Ciise – Guddoomiye ku xigeenka jaamacadda, isagoo soo dhoweeyey Proff Hodan, ugana warbixiyey jaamacadda iyo waxqabadkeeda, iyo sidoo kale xiriirada jaamacadda gudaha dalka iyo dibadiisaba la leedahay, ugana mahadceliyey dowladda dhiirigelinta waxbarashada puntland.
Sh yuusuf Cabdicasiis – Guddoomiyaha golaha aasaasayaasha jaamacadda ayaa dhankiisa soo dhoweeyey Proff Hodan, kuna ammaanay dadaalka ay ugu jirto taageeridda aqoonta si guud, iyo wada shaqeynta wanaagsan ee jaamacadda kala dhaxeysa.
Sh Axmed Faarax Garaase – Hormuudka Xafiiska Imtixaanka ayaa sidoo kale ka hadlay waxqabadka jaamacadda iyo dadaalka ay u hayso bulshada, isagoo usoo jeediyey Proff Hodan in ay si gaar ah ula saaxiibto jaamacadaha iyo xarumaha waxbarashada si guud.
Dr, Mohamed Khalid – Hormuudka kulliyadda caafimaadka bulshada ayaa dhankiisa talooyin soo jeediyey ay kamid tahay in xiriirka jaamacadda iyo dowladda la adkeeyo, loogana faa’iideeyo bulshada iyo aqoonta.
Proff Hodan ayaa ugu dambeyntii uga mahadcelisay maamulka jaamacadda martigalinta iyo soo dhoweynta wanaagsan, kuna bogaadisay horumarka baaxada wayn ee ay jaamacaddu gaartay waqtigii koobnaa ee ay jirtay, sidoo kale waxay sheegtay kaalinta wayn ee ay jaamacaddu ka gaysatay wax soo saarka bulshada in ay tahay mid loogu abaal hayo, waxay intaas ku dartay in ay si dhow saaxiib ula tahay jaamacadaha, dadaal gaar ahna ay ku bixiso la shaqayntooda.